BGR - - Tele RELAY တစ်ခုငါသည်ဤအသစ်အကြီးအပလီကေးရှင်းအတွက်မကြည့်ကြပါလျှင်ကျွန်မဘယ်တော့မှ Netflix နဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ
မူလစာမျက်နှာ » Entertainment BGR - ငါကဒီသစ်ကိုအကြီးအပလီကေးရှင်းအတွက်မကြည့်ကြပါလျှင် "ငါသည်ဘယ်တော့မှ Netflix နဲ့ကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ
သငျသညျ HBO ရဲ့ဆောင်ပုဒ်က "HBO ရဲ့ဒါဟာတီဗီမဟုတ်ဘူး" သည်မည်မျှသိ? ဒါကကြေညာချက်ဒီတော့နှစ်ပေါင်းများစွာတစ်ဆောင်ပုဒ်ဖြစ်မထားပါဘူး, ကအမှန်တရားဖြစ်ခဲ့သည်။ HBO programming ကိုတစ်အရေးအသားတန်ဖိုးနှင့်မတူနိုင်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, သူတို့ရဲ့မျိုးအတွက်ထူးခြားတဲ့ခဲ့ကြသည်။ သို့သော်ဤသည်နေ့ရက်ကာလ, HBO ကဘာမဟုတျပါဘူး။ အဆိုပါကွန်ယက်သည်အစဉ်အမြဲထူးခြားဆန်းကြယ်ထုတ်လွှတ်မှုကိုထုတ်လုပ်, ဒါပေမဲ့တခြားကွန်ရက်များကသူတို့ဂိမ်းတိုးတက်ခဲ့ကြပြီးယခုသင်ကအနည်းဆုံးတဒါဇင်ကွဲပြားခြားနားသောစတူဒီယို၏ရှိုးပွဲ "HBO အရည်အသွေး" ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။ သူတို့တွင်သင်တန်း Netflix ၏ဖြစ်တယ်, အချို့သော Netflix နဲ့အတော်ကြာနည်းလမ်း HBO စံချိန်မူကြောင်းကိုပြောပါလိမ့်မယ်။ ရုံမနေ့ကတစ်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ငါ HBO subscription ကိုငါ့ Netflix သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းသွင်းမှုကိုပယ်ဖျက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါကိုရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အကြှနျုပျကိုမေးတယ်။ မကြာသေးမီက5လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသကဲ့သို့ငါ HBO cancel ဘယ်တော့မှနိုင်ဘူး။ သို့သျောယနေ့ငါချက်ချင်း HBO ကျော် Netflix နဲ့စောင့်ရှောက်ဖို့ရွေးချယ်လိမ့်မယ်။ သငျသညျအသှေးကို၏စည်းကမ်းချက်များ၌ HBO ကိုက်ညီသောမူရင်းပရိုဂရမ်များနှင့်လူအပေါင်းတို့သည်အချိန်သစ်ကိုဖြည့်စွက်နဲ့အတူ Third-party အကြောင်းအရာတစ်ခုကျယ်ပြန့်စာကြည့်တိုက်ရ။ HBO မက်စ်စီစဉ်ထားအဘယ်ကြောင့်ဤအသိသာဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အခြားဇာတ်လမ်းပါပဲ။
ငါ Netflix ငါသည်ကိုယ်ရှုံးစေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အရာမပါဘဲသာ streaming ဝန်ဆောင်မှုကြောင်းစဉ်းစားတယောက်တည်းပေါ့စဉ်းစားကြဘူး။ ဤသည် Netflix ဟာပြီးပြည့်စုံသည်ဟုမဆိုလိုပါ။ သင်တစ်ဦးအစီအစဉ်ရုပ်ရှင်တစ်ခုသို့မဟုတ်အထူးအစီအစဉ်ကိုရှေးခယျြနှင့်အသံလွှင့်စတင်ပါပြီပြီးတာနဲ့သင်မှန်ရာအရပျမှာရှိပါတယ်။ သို့သော်ထို site Netflix ဖို့လမ်းအသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးချင်းစီဖွင့်ပွဲနှင့်အတူ ပို. ပို. စိတ်ပျက်ဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်လူဦးရေထူထပ်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါသည်အလျင်အမြန်က streaming ဝန်ဆောင်မှုကို interface နှင့်အတူပါဆုံးဒုက္ခပြဿနာများအားလုံးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်အဖြစ် Netflix နဲ့ဖြန့်ဖြူးဖို့ငါ့အကြိုက်ဆုံးလမ်းဖြစ်လာခဲ့သည်အသစ်တစ်ခုလျှောက်လွှာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သင်တစ်ဦးနဲ့ Mac ပေါ်မှာ Netflix နဲ့စောင့်ကြည့်နေလျှင်, Netflix သည် Clicker dbk ဓာတ်ခွဲခန်းများ, ဤသငျသညျအစဉျအမွဲသုံးစွဲဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး $5ဖြစ်ကြသည်။ ဤသည်အံ့ဩဘွယ်သောရိုးရှင်းတဲ့ app ကို Netflix နဲ့ web site ကိုမှတစ်ဦးပေါ်တယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေမယ့်သင်တို့ကိုမုန်းသောသူအပေါင်းတို့သည်မလိုအပ်သောသတင်းအချက်အလက်အထဲကစစ်ထုတ်ပေးနှငျ့သငျစီးဆင်းချင်မှသာအကြီးအကြောင်းအရာထွက်ခွာမည်။
ငါအရှိဆုံးကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းအထူးသဖြင့် Netflix ဟာအင်္ဂါရပ်များအပြည့်အဝထုပ်ပိုးယခုအသစ်အကြီးအပလီကေးရှင်းပေမယ့်အနည်းငယ်။
ပထမဦးစွာ Netflix ဟာအဘို့အ Clicker လူတွေအများဆုံးမုန်းတီးတဲ့ပြင်ဆင်ချက် Netflix ဟာပြဿနာပါဝင်သည်။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့င်ငါ Auto-ကစားအမြည်းကိုဆိုလိုတာ။ Netflix နဲ့စတင်ထက်ပိုဆိုးချက်ချင်းရုပ်ရှင်သို့မဟုတ်ဤအချက်မှာ Netflix နဲ့အားပေးအားမြှောက်ထားတဲ့မူရင်းအစီအစဉ်အတွက်တစ်ဦးနောက်တွဲယာဉ်အားဖြင့် assailed ဘာမျှရှိပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်ကစားခြင်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပေါ်င့်ရပ်တန့်ဖို့ဆင်း scroll? ဒါကညာဘက်ရဲ့ ... အခြားနောက်တွဲယာဉ်ကိုအလိုအလျောက်ကစားခြင်းစတင်သည်။ သင်တို့သည်နောက်နောက်တွဲယာဉ်ရှိကြောင်းတစ်ခုခုမှ scroll လာသောအခါအဘယ်ဖြစ်သွားမလဲ Yup ... ဒါဟာရုံပြပွဲသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်ကွင်းဆက်တစ်ခုကျပန်းမြင်ကွင်းတစ်ခုကစားခြင်းစတင်သည်။ Ugh .
Netflix နဲ့မှတစ်ဦးက clicker သင် Preferences မျက်နှာပြင်အတွက်စစျဆေးနိုငျတသေတ္တာနှင့်အတူရူးရပ်လိုက်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းပိုစတာပေါ်တွင်ပျံ၏သက်ရောက်မှုကို disable အလိုအလျောက်မိတ်ဆက်ခြင်း skip အလိုအလျောက်အသီးအသီးဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အဆုံးမှာ program တစ်ခု၏နောက်ဇာတ်လမ်းတွဲမှရွှေ့နှင့်ထို့ထက် ပို. နိုင်ပါတယ်။ သင်တစ်ဦးက MacBook Pro ကိုအသုံးပြုတယ်ဆိုရင်သင်ထိတွေ့ bar ထဲကနေအရာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုလည်းသင်ဗီဒီယိုကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်သင်အလုပ်လုပ်နေချိန်တွင်အလုပ်မလုပ်ဖို့ကြိုးစားချင်တယ်ဆိုရင်ပုံထဲမှာရုပ်ပုံ mode ကိုပြောင်းခွင့်ပြုပါတယ်။ သင်အကြိုက်ဆုံးပြပွဲကိုလိုက်နာပါ။
ဒါဟာလုံးဝကိုသင် Netflix နဲ့စောင့်ကြည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အကြီးအ application ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ Starbucks ကမှာကော်ဖီတစ်ဖန်စီသောက်သောခွက်ကိုအဖြစ်နီးပါးသလောက်ကုန်ကျသည်။ ဆက်ဆက်စစ်ဆေးပါ။